ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကြန်ကြီးကို အကျည်းတန်အောင် မလုပ်ကြနဲ. .....
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကြန်ကြီးကို အကျည်းတန်အောင် မလုပ်ကြနဲ. .....
အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လေ ... ကဲ.ရဲ.တာမဟုတ်ဘူး တော်တော်ပုံပျက်ဆိုးရွားနေလို.
သင်္ကြန်နဲ. Social ကျတာ လားလားမှမသက်ဆိုင်ဘူး ကိုယ်တွေသိတဲ့ မြန်မာ့သင်္ကြန်ဆိုတာ
သင်္ကြန်တွင်းမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားတွေကို ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုမယ် သက်တူရွယ်တူချင်းလည်း နံ.သာရည် (( အခုခေတ်က သက်တူရွယ်တူချင်း ရိုးရိုးရေပေ့ါနော် )) နဲ.လည်း အေးအေးဆေးဆေး ရေပက်ဖျန်းကြမယ် တစ်ချို.ကလည်း ဥပုပ်စောင့်မယ် အချင်းချင်းရုန်.ရင်းကြမ်းတမ်းစွာမပြောဆိုရဘူး သူတစ်ပါးထိခိုက်စေမယ့် အပြုအမူမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်
ဒီလို အခြေခံလေးတွေ ကိုသိပီး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲစေချင်တယ် ဒါမှလည်း ကိုယ့်မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ဆိုတာက မပျောက်ပျက်မှာလေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရေကစားတဲ့ သူတွေရှိသလို သရုပ်ပျက်ရေကစားနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် ဒီလိုသာ ငါ့မြင်းငါ့စိုင်းငါ့စစ်ကိုင်း ရောက်ရောက်ဆိုလို.ကတော့ သူများအထင်အမြင်မသေးခင် ကိုယ့်အချင်းချင်း အထင်အမြင်သေးခံရတာပိုရှက်ဖို.ကောင်းတယ် မိန်းကလေးတစ်ချို.လည်းသရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်ပီး သင်္ကြန်မှာ ဘီယာသောက် အဲ့လိုလုပ်ရပ်တွေက မိမိ ကို သူများ မုဒိန်းကျင့်ဖို.လက်ယပ် ခေါ်နေတာနဲ.အတူတူဘဲးးးးးး
ယောကျာင်္းလေး တစ်ချို.ကလည်း အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေကို ကိုယ့်နှမရင်းသဖွယ် ပျော်တာလည်းပျော်ကြ အပျော်ကြားလေးတွေမှာ စောင့်ရှောက်စေချင်တယ်
Credit to >><<< The Voice Weekly
ယိုးဒယား သင်္ကြန်မှာလည်းဒီလိုတဲ့ဗျာယိုးဒယားတွေ ကိုိ့ယို့ကားယားနဲ့ ........... :D